Kunze Kunongedza, Mazuva ano Edhi Maguru - Piedra
PIEDRA (XIAMEN) RUDO rwe CO,. iri nyanzvi mukugadzira mifananidzo yakavezwa uye zvifananidzo, senge zvifananidzo zvesimbi, zvifananidzo zvebronze, zvifananidzo zororo, zvifukidzo zvemafirigirosi, nezvimwewo .. Idzo zvindarira zvendarira uye simbi mhizha zvinogona kushandiswa sekunze kwebindu, zvidhori zvakakura zvekunze, Shongedzo yemadziro esimbi, zvishongo zverudzi, nezvimwewo ..
PIEDRA (XIAMEN) RUDO rwe CO,. inoshongedzwa kugadzira zvifananidzo uye zvimisikidzwa, sekududzira simbi, zvimiti zvendarira, zvifananidzo zvesimbi, zvicherwa fiberglass, nezvimwewo. ..
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD sekambani yehunyanzvi yekuveza ine vedu vagadziri uye fekitori, ine zvakawanda zviitiko mukuveza zvivezwa zvesimbi, zvidhori zvebronze, fiberglass resin zvivezwa. Isu tinogara tichipa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, kusimba yemhando yepamusoro, zvakanakisa-kutengesa sevhisi kune vatengi. Kugutsikana kwako ndiko kukurudzira kwedu kugadzira zvivezwa zvisingadaviriki uye zvinonakidza.
Ndinokutendai nekuda kwezvifananidzo zvikuru zvawatiitira makore iwayo. Iwo matanda esimbi asina kusimba anoshamisa kwazvo uye akwezva vashanyi vakawanda mubindu gorofu.
Iyo Huge Mirror Sculpture dhizaini mune isingabvumike chimiro, iyo inoratidzika kunge isingabvumirwe howa. Iyo saizi yakakura uye ingangoita 2m kukwirira iyo yakakodzera yekuisa yemukati seye indoor art chishongo chivezwa. Mifananidzo yakavezwa inogona kuchengetwa mushe kwenguva yakareba uye haisi dambudziko kuchengeta makore anopfuura makumi mashanu-80. Saka kana iwe uchida zvigadzirwa zvemaoko seiyi, ndapota taura nesu nekukurumidza. Isu tinokupa iwe kukwikwidza mutengo kune yako retifiketi. Icho chinongedzerwa Izita Rakanyorwa: Abstrac ...
Uri kukwezva neRuva iri Stainless Simbi Chidhori? Dhizaini iyi ndeyechokwadi uye inodakadza ndinofunga iyi saruva yemaruva inogona kuiswa mubindu kana muyadhi se art yekushongedza. Iri simbi yakakura simbi ndeimwe yemifananidzo yangu yandaida mudura rekudyara rakakura. Isu tinokwanisa kugadzirisa chero chidhori sezvamunoda. Yedu yewebhu ine mhando dzakasiyana zvigadzirwa kuitira kuti iwe uzviongorore kuti zvirehwa. Iyo Nhoroondo Inotsikisa Yemanje art yegadheni yekushongedza mifananidzo Kutungamidza Yakagadziriswa chifananidzo HAPANA ...
Huru Dzokunze Zisikwa Zvesimbi Zvesimbi Isingazununguki ...
Unoshamiswa neiyi hombe shuwa isina simbi chifananidzo? Yakaiswa munharaunda ye lawn, USA. Ichi chifananidzo chehowa chakawana nzvimbo yechipiri mune imwe yakakurumbira USA art show pakati pe50 mifananidzo. Unogona kuzviona pachako kubva kumeso, nekuti yakagadzirwa mugirazi kumusoro ine yakakwirira gloss nekuturika nekuveza. Yakagadzirwa sehunhu howa, inoshamisa kwazvo kana iwe uchizviona ipapo. Uye vatengi vedu vekunze vane kukoshesa kwakakwirira pane ichi chiumbwa chikuru chekunze. Nei usingasarudze iro sebindu rako kana muyadhi ...
Kunze kwekunze kwakanyanya hukuru iyo inogona kuchengetwa sekushongedza kwekunze, senge chigaro chekushongedza, art show decoration nezvimwe zvakadaro. Yakagadzirwa nejongwe chimiro, yakapukutwa nemagirazi maitiro uye goridhe ruvara. Uye zvakasiyana neyakajairika goridhe vara, iro jongwe chifananidzo chine electroplating goridhe ruvara kuti iwe ugone kuona mumvuri unoratidza pano. Asi ruvara rwegoridhe rwakajairika harugone kuona mumvuri. Panofanira kuvepo chero zvidhina zvebindu resimbi zvinofarirwa newe, ndapota inzwa wakasununguka kutitumira email ku sales1 @ b ...
Iyo simbi hunyanzvi chivezwa chinotamba chisingadzoreke chinzvimbo munzvimbo dhizaini uye kushongedza. Chishongo chesimbi chifananidzo chinogona kuiswa kunze nzvimbo yeruzhinji kana nzvimbo dzemukati, uye zvakare chinogona kushandiswa mune yechinyakare chiitiko. Isu tinoziva zvidhori zvesimbi zvinosanganisira mamwe marudzi akadai seyakagadzirwa nesimbi simbi, mhangura s ...
Nei bronze ichishandiswa pakuveza
Chishongo chendarira chine nguva yakareba chinogona kuchengetwa uye kuchengetwa zviri nani kwemazana emakore. Kuenzaniswa nezvimwe zvidhori, mifananidzo yendarira inewo nhoroondo yakare, handizvo here? Isu tinoziva kuikanda bronze chifananidzo chinogona kugadzirwa kuve mufananidzo, mhuka etc chimiro, nekuda kweminiti uye ruzivo rwakakosha runoda ...
Ko corten simbi inotsemuka here?
Corten simbi kana Weathering simbi ndiyo yakasarudzika mhando yakaderera alloy simbi akateedzerana pakati isina stainless uye yakajairwa kabhoni simbi. Iyo ine mumhepo yekudzivirira yekukanganisa uye inoratidzira chimiro kupfuura yakajairwa kabhoni simbi, uye mutengo wacho unehupfumi kupfuura hwesimbi isina huni. Iyo corten simbi ndiro ...